IZIFUNDO ESIMAHLA kwi-Intanethi ye-Intanethi kunye nokuthumela imiyalezo nge-SMS-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Iibhulogi zeendaba Izifundo SIMAHLA kwi-Intanethi Iphonografi kunye nokuthumela imiyalezo ngefowuni
lawula888 16ti ngo-Oktobha 2020 Iindaba zamva
Kwimeko yokungabikho komthetho wokuqinisekisa ubudala kunye nomngcipheko wokutshixeka okungaphaya apho abantwana banoxanduva lokufikelela kwiindawo ezingamanyala ngokukhululekileyo, iSiseko soMvuzo sithathe isigqibo sokwenza izicwangciso zesifundo 'simahla' ukunceda ootitshala, iinkokheli zolutsha kunye nabazali bancede abantwana babo benze ngcono ukhetho.
Nalu uluhlu lwezicwangciso zezifundo ezisekwe kubungqina bezikolo eziziisekondari kwi-intanethi yamanyala kunye nokuthumela imiyalezo ngefowuni Indlela yethu eyahlukileyo ijolise kwingqondo yokufikisa. Isiseko soMvuzo samkelwe yiKholeji yaseRoyal yaBasebenzi abaqhelekileyo eLondon ukuqhuba uqeqesho kwimpembelelo ye-intanethi ye-intanethi kwimpilo yengqondo nangokwenyama. Fumana izifundo Apha.
Simamele abafundi, ootitshala, iinkokeli zolutsha kunye nabazali ezikolweni nakwiindibano zocweyo. Sivavanye amakhulu amaphepha ophando kwiziphumo zokusetyenziswa gwenxa kwabantu abancinci ngokuhamba kwexesha. Ngoncedo lweengcali ezingaphezu kwe-20 kwimfundo, ezempilo kunye nomthetho, senze izifundo zevidiyo kunye neengxoxo. Siyathemba ukuba ezi zinto ziya kuba lukhuthazo kubantu abatsha kwaye zinike ukuzithemba kootitshala ukuba babonise ezi zihloko zikhohlisayo. Siye salinga izifundo kwi-UK. Bathobela izikhokelo zikarhulumente zakutshanje kubudlelwane nakwimfundo yezesondo.
Ngaba iphonografi iyingozi? Buza ijaji yabafundi. Kwi- "Iphonografi kuvavanyo" sibeka iziqwenga ezi-8 zobungqina obuvela kuluhlu olubanzi lwemithombo, ngokuchasene nokuchasana, ukuvumela abafundi ukuba bazivavanyele umbuzo.
Ukuba uninzi lwe-porn simahla kutheni i-PornHub kunye nezinye iisayithi ze-porn zixabisa iibhiliyoni zeedola? Kwi "Iphonografi kunye neMpilo yeNgqondo", abafundi bafunda ngakumbi ngefuthe loqwalaselo loqoqosho kwimpilo yengqondo. Bafumanisa indlela amajelo eendaba ezentlalo kunye newebhusayithi ye-porn eyilelwe ngokukodwa ukuba ibe ngumkhwa wokwenza ukugcina abasebenzisi befuna ngakumbi nangakumbi.
Ngaba iphonografi iyayichaphazela impilo yengqondo nengokwenyama? "Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngephonografi, ukujonga iphonografi kunye nengqondo yolutsha" kugubungela iimpawu zokusetyenziswa gwenxa. Ngaba ichaphazela ubudlelwane? Yintoni enokwenziwa ngabasebenzisi ukuba baziva bengene ngumgibe nge-porn? Izicwangciso zethu zezifundo zifundisa abantwana malunga neempawu ezizodwa zobuchopho babo bokufikisa kwaye kutheni ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngokufikisa kubenza babe nomtsalane ukususela ebusheni ukuya phambili.
Lubonakala kanjani ulwalamano lokuthembana nothando? Abafundi banomdla wokuxoxa "ngothando, iphonografi kunye nobudlelwane", ngendlela evulekileyo kwindawo ekhuselekileyo. Ndilufumana phi uncedo xa ndifuna inkxaso?
Abasemagunyeni bakujonga njani ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni? Abafundi bavavanya iimeko zophononongo esekwe kwimizekelo yokwenyani yobomi enaleyo ineminyaka eli-11 ukuya kwengama-14 ubudala kunye nenye iseti eneminyaka eli-15-18 ubudala. Kwenzeka ntoni xa umfundi exeliwe emapoliseni? Iwachaphazela njani amathuba emisebenzi exesha elizayo, nkqu nokuzithandela? Izicwangciso zezifundo zijongana nefuthe elisemthethweni lokuthumela imiyalezo ngefowuni.
Zeziphi izinto eziphambili eziqhuba ingqondo, amandla ayo kunye nokuba sesichengeni, ngexesha lokufikisa? Kwi- "Sexting, Iphonografi kunye neBongo yaBafikisayo" bafumanisa eyona ndlela ibhetele yokwakha ubuchopho babo ukuze babe ngumntu ophumelele ngakumbi.
Ngaba i-intanethi engamanyala ingabangela ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, nkqu nakumadoda amancinci? Ifuthe lini elinalo kubudlelwane? Jonga uphuculo lwamva nje kuphando ukusukela kwintetho eyaziwayo yeTEDx, "The Great Porn Experiment" kwi2012.
Ukuba ndifumanisa ukuba andinakuyeka ukujonga iphonografi kwanaxa ndifuna, ndiya phi ndifumana uncedo? Izifundo zonke zibonelela ngemiqondiso yokunceda kwi-intanethi evumela abasebenzisi ukuba bavavanye ngoncedo lweemibuzo ebuzwayo kunye nemibuzo ukuba ngaba bavelise ingxaki yokusebenzisa iphonografi kwaye, ukuba kunjalo, bafumane phi uncedo.
Izifundo ezikwimifanekiso engamanyala kwi-intanethi kunye nokuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni ziyafumaneka kuhlelo lwase-UK kunye neenguqulelo ezahlukeneyo zomthetho wokuthumela imiyalezo ngeScotland, eNgilane naseWales, nakwimibhalo yamazwe aphesheya neyaseMelika. Ezi zimbini zokugqibela azinaso isifundo malunga nokuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala.
Ngolwazi oluthe kratya nxibelelana noMary Sharpe nge-imeyile: Mary@rewardfoundation.org.